28 Mgbe ụbọchị izu ike ahụ gasịrị, mgbe chi ka na-abọ abọ n’ụbọchị mbụ n’izu, Meri Magdalin na Meri nke ọzọ bịara ile ili ahụ.+ 2 Ma, lee! oké ala ọma jijiji mere; n’ihi na mmụọ ozi Jehova si n’eluigwe gbadata wee bịa kwapụ nkume ahụ, nọdụkwa n’elu ya.+ 3 Ọdịdị ya yiri àmụ̀mà,+ uwe ya na-achakwa nnọọ ọcha.+ 4 Ee, n’ihi egwu ha na-atụ ya, ndị nche ahụ mara jijiji wee dị ka ndị nwụrụ anwụ. 5 Ma mmụọ ozi+ ahụ gwara ndị inyom ahụ, sị: “Unu atụla egwu, n’ihi na m maara na unu na-achọ Jizọs,+ onye a kpọgidere n’osisi. 6 Ọ nọghị n’ebe a, n’ihi na a kpọlitere ya,+ dị ka o kwuru. Bịanụ, lee ebe ọ tọgbọbu. 7 Gaakwanụ ọsọ ọsọ kọọrọ ndị na-eso ụzọ ya na e mewo ka o si ná ndị nwụrụ anwụ bilie,+ ma, lee! o buruwo unu ụzọ gawa Galili;+ n’ebe ahụ ka unu ga-ahụ ya. Lee! Agwawo m ya unu.”+ 8 Ya mere, ha ji egwu na oké ọṅụ hapụ ili ncheta ahụ ọsọ ọsọ, gbara ọsọ gaa ịkọrọ ndị na-eso ụzọ ya.+ 9 Ma, lee! Jizọs zutere ha wee sị: “Ndeewonụ!” Ha bịara jide ya n’ụkwụ ma kpọọrọ ya isiala. 10 Jizọs wee sị ha: “Unu atụla egwu! Gaanụ kọọrọ ụmụnna m,+ ka ha gaa Galili; n’ebe ahụ ka ha ga-ahụ m.” 11 Mgbe ha nọ n’ụzọ, lee! ụfọdụ n’ime ndị nche+ ahụ banyere n’ime obodo wee kọọrọ ndị isi nchụàjà ihe niile mere. 12 Mgbe ha na ndị okenye zukọrọ ma gbaa izu, ha nyere ndị agha ahụ mkpụrụ ego ọlaọcha hiri nne+ 13 wee sị: “Kwuonụ, sị, ‘Ndị na-eso ụzọ ya+ bịara n’abalị zuru ya mgbe anyị na-ehi ụra.’ 14 Ọ bụrụkwa na ihe a eruo gọvanọ ntị, anyị ga-arịọ ya arịrịọ, meekwa ka unu ghara ichegbu onwe unu.” 15 Ya mere, ha naara mkpụrụ ego ọlaọcha ndị ahụ wee mee dị ka a gwara ha; a gbasakwara okwu a n’ebe niile n’etiti ndị Juu ruo taa. 16 Otú ọ dị, mmadụ iri na otu ahụ bụ́ ndị na-eso ụzọ banyere Galili+ gaa n’ugwu, bụ́ ebe Jizọs mere ndokwa ka ha gaa, 17 mgbe ha hụrụ ya, ha kpọọrọ ya isiala, ma ụfọdụ nwere obi abụọ.+ 18 Jizọs wee bịakwute ha, gwa ha okwu, sị: “E nyewo m ikike niile+ n’eluigwe na n’elu ụwa. 19 Ya mere, gaanụ mee ndị mba niile+ ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m.+ Na-eme ha baptizim+ n’aha nke Nna+ na nke Ọkpara+ na nke mmụọ nsọ.+ 20 Na-ezi+ ha ka ha debe+ ihe niile m nyere unu n’iwu.+ Ma, lee! m nọnyeere unu+ ụbọchị niile ruo ọgwụgwụ usoro ihe a.”+